Maxaa dhacaya haddii Maraykanku weeraro Iiraan ma guulaysan karaa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maxaa dhacaya haddii Maraykanku weeraro Iiraan ma guulaysan karaa
Kadib markey fashilmeen hubkii balaayiinta doolar looga iibiyay wahaabiyada Sucuudiga ayna soo gaareen qasaare horleh ayaa Maraykanku sheegay inuu xulufo u raadsano Iiraan oo aanu keligii geli Karin dagaalka.
Xulufada uu ka hadlayo ayaa noqotey kuwa ay siiyaan shilimaadka ee Masaarida, Siniigaal, Suudaan iyo kuwa kale oo gaaja ah maadaama maraweynta Sucuudiga iyo Imaaraadka ayna dagaal geli Karin.
Xagjir Taram ayaa ilaa hadda isticmaalaya siyaasad uu hub badan uga iibiyo wahaabiyada Sucuudiga una sheego Iiraan ayaa kula dagaalsan markaa hub difaac ayaad u baahan tahay.
Hubka ilaa hadda uu keenay waa kuwo difaac iyo kuwo weerarba oo u badan maraakiibta laga gano gantaalaha jooga hoose ku duula. Hadaba maxaa dhici kara haddii xilligan uu gantaal ku dhifto Iiran gaar ahaan goobaha saliida oo ah sida Sucuudigu rabo.
Iiraan waxay soo ganaysaa waxay haysaba ayadoo beegsanaysa dhamaan goobaha saliida ee Sucuudiga, waxana sidaas faaiido ku qaba Maraykanka oo markaas sailiidiisa ku iibin doona lacag farabadan.
Ma soo geli karaan Iiraan
Jawaabtu waa maya waayo Maraykanku iyo xulufadiisa afka Ingiriiska ku hadlaa waxay u baahan doonaan dhul ay weerar ka soo qaadaan mana haystaan oo Ciraaq waxa fadhida dawlad raacsan Iiraan oo hadda ka fekeraysa inay wahaabiyada Sucuudiga dhankeeda ka weerarto.
Maxaa u furan marka
Talaabada keliya ee u furan waa inay isku haleeyaan gantaalaha iyo diyaaradaha cirka taas oo Iiraan difaac ku filan ka haysato hadda, waxa xilligan ku daayay saliid Sucuudigu dhoofiyo iyo daarihii iyo fooqyadii Imaaraadka oo dhulka lala simay.
Cabaadka Imaaraadka ayaa baxaya wuxuuna xilligan ku dhowyahay inay wada qaxaan xadidka gantaalaha ku soo dhacaya awgeed.
Yuhuudu dagaalka maku jirtaa
Haa way ku jirtaa waxana xilligan ay is weerarayaan Xisbullah oo ayna isku awood ahayn laakiin Xisbullah sii daysay waxay hub haysatay iyo Yuhuudii dhulka boobtey oo cabsi xoogleh gashay kuna dhow cidla ciirsila.
Suuriya ayaan Iyana xilligan dagaalku kululaadey wax la harin oo dhankeeda Yuhuuda ku weeraraysa hubkii Ruushka.
Markii Obaama arkey inaan Iiraan waxba looga qaadayn weerar lagu qaado wuxuu bilaabey inuu la heshiiyo laakiin waxaan sugnaa waxa xagjir Taram sameeyo markan.
Isku soo duub waxa kuu muuqanaysa inaan Iiraan looga adkaan Karin dagaal oo xataa khatar geli karto hubka nukliyeerka ee Maraykanku isku halaynayo haddii xaalku sii xumaado oo Yuhuudu isticmaasho.